जो हात धुन्छ, उसको स्वास्थ्य साथमा हुन्छ: विश्व हात स्वच्छता दिवस २०२२ « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
जो हात धुन्छ, उसको स्वास्थ्य साथमा हुन्छ: विश्व हात स्वच्छता दिवस २०२२
२०७९, २२ बैशाख बिहीबार १०:३८ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । आज विश्व हात स्वच्छता दिवस २०२२ । हात सफा राख्न मानिसहरूलाई सचेत गराउन हरेक वर्ष मे ५ मा विश्व हात स्वच्छता दिवस मनाउने गरिएको छ । हामी सबै कोभिड–१९ महामारीसँग लडिरहेको यस समयमा यो दिनको महत्व हाम्रो जीवनमा झनै बढेको छ । कोरोना महामारी सुरु भएदेखि हामीले सरसफाइको महत्व झनै बुझ्न थालेका छौं ।
सन् २००९ मा सुरु भएको ‘क्लिन योर ह्यान्ड्स’ विश्वव्यापी अभियानलाई हरेक वर्ष मे ५ लाई विश्व हात स्वच्छता दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यो दिवसको उद्देश्य स्वास्थ्य सेवामा हात स्वच्छताको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन, दृश्यता र दिगोपन कायम राख्नुका साथै विश्वभर हात सरसफाइ सुधारको समर्थनमा ‘मानिसहरूलाई एकसाथ ल्याउन’ भन्ने हो ।
विश्व हात स्वच्छता दिवस २०२२ः विषयवस्तु
यस वर्षको विश्व हात स्वच्छता दिवसको नारा ‘गुणस्तर र सुरक्षा जलवायु एवं संस्कृति’ भन्ने रहेको छ । यो वर्ष हामीले हाम्रो हातको सरसफाईको माध्यमबाट वातावरण एवं सुरक्षा र गुणस्तरको संस्कृति थप्न सक्छौं भन्ने मान्यतामा केन्द्रित छ । तर बलियो गुणस्तर र सुरक्षा संस्कृतिले मानिसहरूलाई सही समयमा सही उत्पादनहरूमा पहुँचभित्र ल्याउन मद्दत गरिरहेको छ । साथै यो दिवसले हात सफा गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यद्यपी सबै ठाउँमा हात स्वच्छतामा एकजुट हुनुहोस्, कुरा गर्नुहोस् र सँगै काम गर्नुहोस् भन्ने सन्देश दिएको छ ।
विश्व हात स्वच्छता दिवस २०२२ः को सन्देश
-१० मध्ये १० बिरामीले सफा हातले हेरचाह गर्न रुचाउँछन् ।
– मूर्ख नहुनुहोस् र साबुन प्रयोग गर्नुहोस् ।
– कीटाणुहरू विरुद्धको लडाई हात–हातमा छ ।
– स्वास्थ्यका लागि आफ्नो हात धुनुहोस् ।
-फोहोर नगर्नुहोस्, हात सफा राख्नुहोस् । खाना खानु अघि हात धुनुहोस् ।
-हात धोएर कीटाणु नफैलाउनुहोस् ।
– हात धोएर कीटाणुहरू टाढा राख्नुहोस् ।
– स्वास्थ्यका लागि सफा हात धेरै महत्वपूर्ण छ ।
-जो हात धुन्छ, उसको स्वास्थ्य साथमा हुन्छ ।
-हात धोएर तपाईं रोगहरू धुन सक्नुहुन्छ ।
कहिले र कति समयसम्म हात धुनुपर्छ ?
कम्तिमा २० सेकेन्डसम्म पानी र साबुनले हात धुनुपर्छ । विशेषगरी शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि, खाना खानु अघि, हाछ्युँ गर्दा वा खोक्दा वा हात फोहोर हुँदा हात धुन जरुरी हुन्छ ।
हात धुनुको महत्व के हो ?
वाटरएडका अनुसार, पानी सम्बन्धी रोगहरू र हातको सरसफाइको कमीका कारण हरेक वर्ष विश्वभर ४४ करोड ३० लाख विद्यार्थीको स्कूल छुट्ने गरेको छ ।
युनिसेफका अनुसार हात सफा राख्दा झाडापाखालाबाट ज्यान गुमाउने बालबालिकाहरुको संख्या ४० प्रतिशतले घटाउन सकिन्छ र ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल समस्या भएका मानिसहरूको संख्यामा २९ देखि ५७ प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सकिन्छ । साथै कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिहरूको संख्या घटाउन मद्धत गर्छ ।